यी १२ राशिमध्ये यी २ राशिका व्यक्ति हुन्छन् पढाईमा निकै तेज, तपाईको कुन राशि ? – Sandes Post
April 15, 2022 320
तपाईले देख्नुभएकै छ होला कुनै व्यक्ति कठिन भन्दा पनि कठिन चिजलाई एकदमै सरल तरिकाले समाधान गरिदिन्छन् । त्यस्तै कोही यस्ता हुन्छन् । जो सरल चिजलाई पनि समाधान गर्नमा बहुतै समय लगाउने गर्दछन् । के तपाईलाई थाहा छ ? शास्त्रअनुसार हाम्रो राशिले हाम्रो मानसिक स्थितिमा पनि असर पार्दछ ।
आउनुहोस् जानौँ ती राशिका बारेमा जो पढाईमा अत्यन्तै तेज हुने गर्दछन् :
वृश्चिक र कुंभ राशिका मानिसहरु सबै भन्दा बढी बुद्धिमानी मानिन्छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको बुद्धिमत्ता एकदमै छिटो हुन्छ।
वृश्चिकका मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउन यो एकदम असम्भव छ। यी व्यक्तिहरू दिमागको एकदमै तीखो हुन्छन् र यिनीहरुले आफ्नो जीवनमा केही गर्ने ठान्दछन् भने त्यसलाई पुरा गरेर नै छोड्दछन् ।
Prevपल शाह को लागि म मर्न पनि सक्छु भन्दै यि युवाती ले पठाइन यस्तो चिठी
Nextयिनै हुन् मृ’त भेटिएकी अमृता, त्यो दिन यस्तो सम्म भएको रहेछ-